Izvozvo zvinoreva kuti mumusangano weawa imwe chete, maminetsi e12 chete ekugadzirira kubatsira pakuwanda kwemigumisiro yako. Iwe uchada kuita kuti maminitsi iwayo aite zvechokwadi. Shandisa miitiro yakawanda inoshandisa zvinopfuura boka rimwe chete remasumbu pane imwe nguva kunyatsoshandisa nguva yako.
Chero chero muviri unoumba zvinangwa unogona kuwanikwa chete nokudya kudya kwakanaka. Kana uri kuenda kumitambo kuitira kuti iwe ugone kuenda kumba uye udye cheeseburger mbiri ne 2-munhu anoshumira chiFrench fries, iwe haugoni kuita muviri wako chero zvipi zvayo. Paunenge uchienda kunotengesa mabhizimisi, tenga utano hwakanaka panzvimbo yezvisina kudya zvokudya.
Iwe unofanirwa kuona kuti iwe unodya uchienzanisa, uye uchiyeuka mupfungwa kuti kana uri kupisa mamwe makoriyori, uchafanira kudya zvishoma kuti uone kuti une simba rakakwana kwezuva rose. Ita kuti uwane kudya kwakakwana uye usadya kudya kwemafuta.
Iwe unofanirwa kuva nechokwadi chokuti unodya zvakanaka uyewo unodya utano. Kudya zvakanaka kunosanganisira kudya panguva dzakakodzera dzezuva. Kusafamburwa kwekudya kwekudya mangwanani-ngwanani chinhu chinotyisa chaizvo uye iwe haufaniri kudya zvakanyanyisa usiku. Kudya manheru usiku kana kana uchinetseka kunotungamirira kukudya makoriori asina kufanira. Taura nemudzidzisi wega pamusoro pezvaizobatsira iwe kuitira kuti iwe ugone kuzadzisa zvinangwa zvako.
Kuti uve nechokwadi chokuti unoziva nguva yauchazove uchidzidziswa uye apo iwe unogona kutarisira nguva yekugadzirisa, iwe unofanirwa kutanga neurongwa. Yeuka kuisa mazuva ekuzorora uye uve nekunzwisisa pamusoro penguva yakawanda yekusununguka kwako.
Yeuka kugara nemararamiro ako zvakanyanya sezvinobvira kuitira kuti usapinda muitiro wekucheka gym. Kupamba gym kakawanda tsika yakaipa. Iwe hauzokwanise kuzadzikisa zvinangwa zvako kana iwe ukapinda muitiro wekushayikwa kwako kubasa.
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti muviri wako shanduko unoda kuzvipira kwakakwana kubva kwauri. Iwe haugoni kutsika zuva rimwe kana maviri pane imwe nguva, nokuti unonzwa sokuti iwe unofanirwa zuva rega. Ronga apo zuva rako rokuzorora richave riri uye unamatire kune icho. Kunyange kana iwe uine rwendo rakarongeka, shanyira gym, uye iva nechokwadi chekutora awa kubva kune rimwe zuva rimwe chete kuti uite. Ramba uripo nehupenyu hwakanaka uchidya zvakare.
6. Usatendera Maonero Okutanga Kuita Kuti Uende
Kana iwe uri musikana ari kuedza kuderedza uremu uye kukudziridza munhu akaremara uye muduku, zviri nyore kutarisa musikana wemudzimai uye kamwe-kamwe kutya.
Ichokwadi ndechekuti hazvigoneki kuti vakadzi vasaita zvakadaro; inoda chirongwa chimwe nechimwe. Iwe hausi kuzoenda zvakashata kana iwe ukaramba uchienda purogiramu iyo mudzidzisi wako pachake akupa iwe.
Tanga nedzimwe nhepfenyuro zvishoma uye uwedzere chirongwa chako chekuita basa sezvo iwe unowedzera kuvimba uye sezvo utano hwako hwakatanga kubuda.
Iva nechokwadi chekuti iwe unozviita kuti uvepo kuti uite basa uye uve nepfungwa yakaipa yekuti iwe unoda sei kubasa kwako kuenda. Iwe unofanirwa kuuya nemamwe zvinangwa zvechokwadi zvakare, saka kana iwe uchida kuva ne 6-pack mimba, chinangwa chekuwana imwe tsanangudzo yemasumbu mukati memwedzi ye6 kana kana uchida kurasikirwa nemapundi ane 20, iva nechokwadi chokuti nguva yaunenge uzvigadzirira iwe inogoneka. Hapana mudzidzisi wega angakwanisa kukubatsira kana iwe usingazivi zvinangwa zvako ndezvipi.
Iwe unoda kuva nemakumbo emakumbo e6, mabiceps makuru, uye makumbo ane simba? Iwe haugone kuwana zvinhu izvozvo nekungosimudza zvisikwa. Unofanira kuyeuka kuita cardio pamwe chete. Kune marudzi akasiyana-siyana emichina inowanika pane dzakawanda masangano ehutano. Zvose zvinowanzogadzirisa zvinyorwa, zvinyorwa zvemafuta, zvidzidzo zvekuvhiya, nemichina yekugadzira.
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unopisa mafuta nekuita kazhinji cardio uye pakupedzisira musumo wako tsanangudzo inotanga kuratidza.
10. Usave Usingafungi paGym
Usanetseka pamusoro pevamwe vanhu kungoisa pfungwa dzako pane zvinangwa zvako uye ita basa rako. Kana iwe uchitya kushanda iwe pachako, kushanda pamwe neshamwari kana kuita kirasi yekudzidzira nevamwe nevamwe vanhu.